Somunhu Premier Stainless simbi pamusoro mugadziri muna China, Foshan Hermdeco Steel Co.,Ltd hwagadzwa muna 2006, iyo anoedza kuti Stainless simbi utsanzi uye unhu kwemakore anopfuura 10. Saka kure, isu zvave kuva guru Integrated zvebhizimisi kuti Stainless simbi zvinhu Magadzirirwo, kugadzira.
Wedzerai mijenya muzvirongwa uye fenicha mafekitari, Chirongwa Airport, Metro uye Building Architecture, Stainless simbi stockholder muSouth Korea, Thailand, Vietnam, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Philippines.
Kuti vasangane mijenya pamusoro vatengi vade uye chikumbiro, ikozvino yatinozvipira ose munda apo Stainless simbi inoshandiswa, Stainless simbi waMosesi, Stainless simbi zvinhu & nhema kusanganisira partition, Trims, erevheta zvikamu, trolley, etc.
- With makore anopfuura 10 ruzivo muminda izvi, tine nyanzvi & simba kwekurasira chikwata.
- Our yepamwedzi Vhoriyamu rokutengesa rinosvika matani anopfuura 10000, uye zvinhu zvedu dzakakurumbira zvikuru pamba uye kunze, kufanana Middle East, Southeast Asia uye Africa, etc.
- With yemhando michina uye Newest zvigadzirwa, takanga zvinozivikanwa se muenzaniso zvebhizimisi nokuda yokuisvonaka mureza.
- Inopera yepamusoro kudzora gadziriro, pashure-sale rutsigiro & basa.
- Customized mubvunzo nguva dzose aigamuchira! FREE SAMPLES zvinogona akatumira pamusoro chikumbiro!